Qormo Kooban Oo Hugotusaale u ah Madaxweynaha La Doortay.
Wednesday November 29, 2017 - 15:01:41 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Dulucda sheekadaas kooban waa dhibka iyo cawaaqib xumada caddaalad-darrada iyo sinnaan la’aanta u leedahay yar iyo weynba. Sidaas awgeed, madaxweynaha la doortay waxa la gudboon in dadka uu mas’uulka ka yahay - sida uu ballanqaaday, lagana rajaynayo - uu u caddaalad falo inta karaankiisa ah.
Faa’iidooyinka caddaalada iyo Sinnaanta waxa inagaga filan qisadan: ‘Markii uu Cumar Bin Khadaab (Illaahay ha ka raali ahaadee) la wareegay maamulka muslimiinta ayaa boqorkii dawladdii Beershiyaanka – oo wakhtigaas ku jirtay kaalinta uu hadda ku jiro Maraykanku - u soo diray mid ka mid ah hoggaamiyayaashiisii ugu geesisanaa oo la odhan jiray Hurmusaan, waxaana uu yimi magaalada Madiina oo ahayd caasimaddii dawladdii Muslimiinta. Hurmusaan markii uu soo gaadhay aqalkii Cumar ayaa loo sheegay in uu masjidka ku maqan yahay, haddana waxa uu ka waayay masjidkii, waxana uu ugu danbayn helay Cumar Binu Khadaab oo geed hoostii jiifa, labadiisii kaboodna barkaday, kolkaas ayuu aad uga yaabay ninka magaciisu gaalo oo dhan uu ka yaabiyay cabsi ay ka qabaan awgeed iyo sida uu geedkan isaga hoos jiifo.
Ninkaas geesiga ah, waa Hurmusaanee, ayaa waxa laga qoray hadal taariikhda galay oo macnihiisu yahay; "Caddaalad ayaad samaysay, kolkaas ayaad aammin noqotay oo cabsi ka nabadgashay, dabadeedna waad seexatay (geed cidlo ah hoostii)”.